Ukulungiselela "Sydnopharm" kuyinto asebenzayo izindlela neuropathy olukwaziyo ekwandiseni lumens yegazi nokwehlisa ingcindezi kulo. Futhi kunomthelela zokuvimbela izidakamizwa futhi esiqoshiwe ukuhlaselwa angina, isetshenziselwa ukwelapha ezinye zezimpawu zokuthi esingamahlalakhona senhliziyo.
Umgomo we isinyathelo zomuthi
Kusho "Sydnopharm" - nitric oxide donator ikhishwa wukukhanya esebenzisa ukulungiselela eyingozi umzimba. Le ngxube kanambambili kuvusa encibilikayo guanylate cyclase, emakamu anda elibangela ukuphumula kwemisipha bushelelezi e imithambo yegazi. Lokhu kunciphisa umthwalo izindonga zawo, futhi ngaleyo ndlela abuyiselwe ibhalansi phakathi funa umoya-mpilo futhi lingena egazini. izitsha constricted igazi, okuyinto bayakwazi esisuka, ukwandisa ngaphansi kwethonya imithi, "Sydnopharm".
Futhi, izidakamizwa kuvimbela ukukhululwa kanye synthesis thromboxane futhi serotonin, okuholela nokucindezela esigabeni ekuqaleni we aggregation la ma-enzyme kanye ukuvimbela igazi ekunqandeni.
Njengoba isenzo begazi zomuthi emzimbeni womuntu "Sydnopharm"? Yokusetshenziswa uthi kwegazi igazi kuyathuthuka ngokusebenzisa le-ejenti e-lateral (dlula) ukugeleza izindlela. Futhi, izidakamizwa ukubekezelelana kwandisa ukucindezeleka futhi kunciphisa ukuvama ukuhlaselwa angina ezivela imizamo engokoqobo.
Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa "Sydnopharm" unciphise emakamelweni inhliziyo esimweni ezingamahlalakhona inhliziyo ukwehluleka efomini kwehlisa umfutho imithambo yamaphaphu. Ngenxa yalesi yokuchayeka ventricle womuntu kwesokunxele umzimba omkhulu ngaphansi igcwele igazi, futhi kwanciphisa nokucindezeleka imisipha esivimba amanzi.
Isikhathi izidakamizwa umphumela
Kanjani ngokushesha ngcono okusobala kwezinto isiguli, lapho kuthatha lesi sidakamizwa "Sydnopharm"? Izibuyekezo iziguli eziningi nokulaywa on the show ukuthi kahle futhi ngokushesha amuncwa isimiso sokugaya ukudla bungene. Isenzo lesi sidakamizwa "Sydnopharm" kungabonwa ngemva kwemizuzu engu-20 ngemva kokungenisa yayo noma ngemva 5-10 imizuzu, uma ubeka tablet ngaphansi kolimi. Inani Eliphakeme umzimba asabela ngayo izidakamizwa siyenzeka phakathi imizuzu engu-30 no-60 ngemva kokuphathwa. Ngempumelelo kusho amahora 6.
Nomuthi "Sydnopharm" cishe asisho abophe ukuze plasma amaprotheni. Inqubo izidakamizwa umzimba kwenzeka esibindi, okukhipha ke ngokwezinga elikhulu ngokusebenzisa nezinso. Endabeni isikhathi eside therapy ukumelana nalokho ingekho lapho usebenzisa lolu izidakamizwa.
Tablets "Sydnopharm": izinkomba ukusetshenziswa
Umuthi isetshenziswa kwezokwelapha kulezi zimo ezilandelayo:
1. Ukuze ukwelashwa kanye nokuvimbela ukuhlaselwa angina.
2. isilethikusebenza ngesinyathelo hemodynamic sinjalo.
3. Endabeni ka esingamahlalakhona of i-ventricle engakwesobunxele efomini oyingozi.
4. Ngesikhathi ingcindezi ephakeme egazini yamaphaphu ethangeni zamanje.
5. senhliziyo efomini ezingamahlalakhona.
Ngo "Sydnopharm" Kulo mBhalo, kukhona esinye isici of ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Izinkomba ukusetshenziswa kwaso kulesi simo - yisifo lapho kubalulekile ukuthatha glycosides kakhudlwana futhi isisu lihambisana izidakamizwa kuboniswe.
Ukuze ugweme yezinkinga ukweqisa izidakamizwa kuphela udokotela kufanele ubeke indlela "Sydnopharm". Izinkomba ukusetshenziswa kwalesi izidakamizwa banesibopho ngokusetshenziswa kwayo ngaphakathi ngesikhathi noma ngemuva kokudla. Geza phansi ithebhulethi kuyadingeka ukuze amanzi eliningi eyanele.
Ukuze uvimbele ukuhlaselwa angina izidakamizwa "Sydnopharm" inikezwa 1-2 mg ukuthola, kusukela ezikhathini 4 kuya ku-6 ekwelapheni lokuqala nelesibili kosuku, 2-4 mg for reception izikhathi 2-3 phakathi nosuku okwalandela. Ngezinye izikhathi umthamo lakhuphuka lafika ku-8.6 mg nokuningi, linanikhulu lema-12 mg.
Umuthi is dosed ngamunye esimweni ngasinye. senani adingekayo yokwelapha kuncike esigabeni kanye nohlobo lesi sifo, kanye nezimpawu. Kuye Yiqiniso lokugula, futhi ngabelwa ukwelashwa ubude.
Ingabe la imiphumela emibi ukusetshenziswa "Sydnopharm" amaphilisi? Yokusetshenziswa zomuthi yazisa ukuthi izindlela uyakwazi ingqondo ukubukeka ikhanda at esigabeni sokuqala nabaphathi bawo. Ngemva esifushane umuzwa iphele.
Futhi ngesikhathi ukusetshenziswa "Sydnopharm" izidakamizwa kungehlisa izinga blood pressure, ngezinye izikhathi isimo wokugoqa. Ngezikhathi ezithile kukhona ukubambezeleka motor futhi ukusabela engqondo. Lesi sici zomuthi uma kubalulekile ukucabangela ukusetshenziswa nabashayeli izimoto kanye nabantu bezinye ukuzibonakalisa ezidinga lokuhlushwa nokwenza izinqumo ezisheshayo emsebenzini.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa ukusetshenziswa "Sydnopharm" amaphilisi (iziguli izilinganiso uqinisekise idatha) bangezwa komzimba okufana isicanucanu, pruritus, isiyezi, ukuqubuka, kanye nezinye komzimba.
Pathologies lapho ukusetshenziswa is contraindicated "ukulungiselela Sydnopharm ':
isigaba okukhulu isilethikusebenza;
glaucoma (ikakhulukazi zakratougolnaya);
cranial, unomfutho wegazi ophakeme;
iziyaluyalu kwegazi ebuchosheni;
sokukhulelwa (senyanga yokuqala) kanye lactation;
ukungabekezelelani ngamunye emuthini.
Ingabe kuyamukeleka ukusebenzisa nezinye imithi namaphilisi ukwelashwa "Sydnopharm"? Yokusetshenziswa zomuthi uthi indlela ngesikhathi esifanayo ingasetshenziswa ne blocker-calcium channel ne-beta-adrenotsepterov.
Uma usebenzisa izidakamizwa ngezinjongo zokwelapha "Sydnopharm" kufanele ayifakiwe ngokuphelele ukuba angene emzimbeni utshwala.
Kwezinye izimo kubalulekile ukusebenzisa kakhulu ngokuqapha ikhambi "Sydnopharm"? Iziyalezo uhlelo lwayo lokusebenza uchaza ukuthi qaphela ukusabela okungahlosiwe umzimba emuthini uma kahle kwegazi cerebral, begodu kukhula ingcindezi intracranial, hypotension lwemithambo, ukufiphala kwamehlo futhi esikhathini ngemva oluhambisana unhlangothi noma isilethikusebenza.
Iziguli kwasebekhulile ebukhoneni nokwehluleka ukusebenza kwezinso noma isibindi kufanele kudle ayimbijana amaphilisi "Sydnopharm". Yokusetshenziswa zomuthi futhi uxwayisa ngokuthi E110 Umbala, okuyinto equkethwe kulo mkhiqizo okwelapha bangase baxabane nomzimba.
Phakathi nenkathi yokukhulelwa, kubalulekile ukuhlaziya ngokucophelela ratio ingozi embungwini unina izinzuzo esizayo ngaphambi kokuba baqale ukwelashwa kusho "Sydnopharm". Kasibili contraindicated ukusetshenziswa ngesikhathi lactation. Uma ukusetshenziswa kwezidakamizwa kubalulekile ngalesi sikhathi-ke, kuyadingeka ukuba ayeke ibele. Izingane kanye intsha engaphansi kwengu-18 ubudala, futhi akuvunyelwe ukusetshenziswa kwezidakamizwa.
Uyini umphumela kungenzeka uma "Sydnopharm" amaphilisi asetshenziswa imali ngokweqile? Endaweni yokuqala igcwele ukwehla elibukhali blood pressure. Lokhu kuphakamisa isiyezi, isicanucanu, ukuhlanza.
Ukwelashwa incike izimpawu yokweqisa. Kuyinto izinyathelo kuphoqelekile okuhloswe ngaso ngokuhlanza umzimba ngokushesha ngangokunokwenzeka kusukela "Sydnopharm" izidakamizwa - ophoqelelwe diuresis noma lavage esiswini.
Ukulungiselela "Sydnopharm" senziwa ngesimo izibhebhe 4 mg noma 2 mg, futhi ngesimo amaphilisi nge senzo eside 8 mg. Umuthi is zahlanganiswa ngendlela contoured anezikhala ipuleti. Ngamunye wabo iqukethe amaphilisi 10. Lezi zingqimba babeminyene emabhokisini, ehlanganisa amakhadibhodi, 3 izingcezu (kwelinye iphakethe equkethe amaphilisi 30).
Tablets "Sydnopharm" kukhona imithi ezinamandla. Bayobizwa egcinwe hhayi ezingaphezu kwezintathu iminyaka endaweni epholile eyomile ezingafinyeleleki izingane ezingeni lokushisa 15 kuya 25 ° C.
The main izidakamizwa esebenzayo "Sydnopharm" umuthi molsidomine. izingxenye Asizayo nomuthi zihlanganisa Avicel-PH 101, uwoyela peppermint, isitashi, hydroxypropyl methylcellulose, i-lactose, magnesium stearate, aerosil 200, mannitol.
Kungenzeka yini ukuba esikhundleni nezinye izidakamizwa "Sydnopharm" ithebhulethi? Analogs yalesi izidakamizwa khona. Lezi zihlanganisa nemithi "Dilasidom", "Korvamin" futhi "Korvaton". Izimfanelo ngamunye aboniswa ngezansi.
Umuthi 'Dilasidom "(" Dilasidom "). Ikhishwa ePoland. isithako wayo esebenzayo, njengasezulwini "Sydnopharm" usho ukuthini, molsidomine (molsidomine). Ngokusho yokwakheka futhi therapeutically-chemical (ATC) ngezigaba nomuthi "Dilasidom" libhekisela vasodilators neuropathy esetshenziselwa yokwelapha iziyo nezidakamizwa antianginal.
Kusho "Korvamin" ( "Corvamin"). It ikhiqizwa eNetherlands. isithako we nomuthi futhi molsidomine. Ngokwe ATC ngezigaba, izidakamizwa "Korvamin" libhekisela antianginal izidakamizwa, futhi vasodilators neuropathy, ezisetshenziswa ekwelapheni izifo zenhliziyo.
Medicine "Korvaton" ( "Corvaton"). Ikhishwa eJalimane. Ezisebenza, ketshezi eziyisisekelo leli thuluzi kuyafana eyomunye amaphilisi analogs "Sydnopharm" molsidomine. Ngokwe ATC ngezigaba nomuthi "Korvaton" kuyinto iqembu ejenti antianginal futhi vasodilators neuropathy, ezisetshenziswa ekwelapheni izifo inhliziyo.
Ngisho ngaphansi kwaziphi izimo is hhayi Kunconywa ukusebenzisa amaphilisi "Sydnopharm" noma analogue zabo ngaphandle udokotela ekwelapheni. Ukuzelapha kungaba nemiphumela awushintsheki ezimbi. Futhi nhlobo ukuba ashintshe isilinganiso semithi oyidlayo nobude yokwelapha, ngokuvumelana nemizwa yabo, ngaphandle kokukhuluma nodokotela.